Taxanaha Waxaa Dhiirrigeliyay 'The Shining' Oo Lagu Amray HBO Max
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Taxanaha Waxaa Dhiirrigeliyay 'The Shining' Oo Lagu Amray HBO Max
HBO waxay soo jiidanaysaa dhammaan joogsiyada loogu talagalay waxyaabaha cusub ee soo socda ee HBO Max, oo ah barnaamij isdabajoog ah oo la dejinayo in la bilaabo Maajo 2020, iyo sida kala duwan, taasi waxay ku jiri doontaa taxane cusub oo ku saleysan iftiinkiis cinwaankeedu yahay eafiya.
Bandhigga waxaa lagu soo saari doonaa JJ Abrams iyo shirkaddiisa Bad Robot Productions.
eafiya ayaa lagu soo waramayaa inay baari doonaan sheekooyinka lama ilaawaanka ah ee hudheelka 'Overlook' sida uu u qoray Stephen King buugiisa 1977, iftiinkiis. Xarumaha sheeko-qoyseedka waxay ku saleysan yihiin qoys qaatay shaqo daryeel ah oo milkiilaha hoteelka ah bilaha jiilaalka. Si kastaba ha noqotee, waxay si dhakhso leh u ogaadaan in hudheelku yahay marna, weligood mashquulin.
Waa, laga yaabee, mid ka mid ah shaqooyinka ugu caansan ee King ee xirfad uu ku dhashay fasallo badan. Waxa uu sheekada ku saleeyay taariikhi ah sidoo kale waxaa la sheegay inuu ku ugaarsanayay Stanley Hotel oo ku yaal tuulada buurta ee Estes Park, Colorado.
Kani waa mid ka mid ah taxanaha Abrams iyo Bad Robot ay u soo saarayaan adeegga qulqulka. Iyaguna way shaqeynayaan Caddaaladda Leak Dark, Iyo Duster, silsilad riwaayad asal ah.
HBO Max ayaa loo dajiyay in la bilaabo bisha soo socota iyada oo la soo bandhigayo buugag aad u tiro badan oo muujinaya iyo filimo iyo waliba asalka asalka ah oo dhan $ 14.99 bishiiba, qiime la mid ah kan hadda HBO Go. Macaamiisha horayba ugu diiwaangashan HBO Go, waxay awoodi doonaan inay kor ugu qaadaan ilaa Max maalinta la bilaabayo.
Miyaad ku faraxsan tahay rajada taxanahan? Noo soo sheeg waxa aad u malaynayso faallooyinka!
HBO MaxJJ AbramseafiyaAdnan BoqoriftiinkiisWaylon Jordan
Lin Shaye wuxuu u socdaa LA gudaha 'Penny Dreadful: Magaalada Malaa'igta'
Soo Bandhigida "Cudurka Cilmu-nafsiga" ee loogu talagalay Cuntada Naxdinta Leh ee Jacaylka